पछिल्लो एक दशकमा यी दश एप्लिकेशन सबैभन्दा बढी डाउनलोड भए, हेर्नुहोस् के-के रहेछन् ? | News Polar
पछिल्लो एक दशकमा यी दश एप्लिकेशन सबैभन्दा बढी डाउनलोड भए, हेर्नुहोस् के-के रहेछन् ?
काठमाडौं । हामी सन् २०२० लाई विदाई गरेर २०२१ मा प्रवेश गरिसकेका छौं । २०७७ को पुष १७ गते शुक्रबारबाट नयाँ वर्ष २०२१ को शुरुवात भएको छ । सन् २०१० यता सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निकै विकास भएको पाइएको छ । यो एक दशकमा विश्वले प्रविधिको क्षेत्रमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ ।
यो दशकमा मानिसहरु टेलिभिजनमा सबैभन्दा बढि रमाएका थिए । यही दशकमा मोवाइल र इन्टरनेटले सबैभन्दा बढि फड्को मार्न सफल भयो । जसका कारण मानिसले टेलिभिजन छाडेर मोवाइल र इन्टरनेटमा बढि समय बिताउन थाले । यस दशकमा मोबाइलको स्वरुपमा पनि परीर्वतन आयो । किप्याड मोवाइल अब स्क्रिन टचमा परिवर्तन भए । मोवाइल भित्रै विभिन्न एप्लिकेशन र गेम समावेश भएपछि यसको सबैभन्दा बढि प्रयोग हुन थाल्यो ।
मोबाइल मार्केट डेटा र एनालिटिक्स फर्म ऐप एनीद्वारा गरिएको अध्ययनले पछिल्लो एक दशक यता सबैभन्दा बढी सोसल मिडियाको प्रयोग भएको हो । २०१० को दशकमा इन्टरनेटमा राज गर्ने र सबैभन्दा बढी प्रयोग भएका मोबाइल ऐप्स कुन–कुन हुन् ? पक्कै पनि तपाइहरुलाई जान्न मन भएको होला । यो दशकमा सबैभन्दा धेरै पटक डाउनलोड गरिएका यी रहेका छन् १० एप्लिकेशनहरु:
२) फेसबुक म्यासेन्जर
३) ह्वाट्सएप म्यासेन्जर
५) स्न्याप च्याट
८) यूसी ब्राउजर
दशौं स्थानमा रहेको ट्वीटर सन् २००६ मा लञ्च भएको थियो । विशेषगरी सेलिब्रेटीका बिचमा प्रभाव जमाउन सफल ट्वीटर विचार राख्ने प्लेटफर्मका रुपमा विकसित भएको छ । ट्वीटरमा २ सय ८० शब्द भन्दा बढी लेख्न पाइँदैन । एजेन्सीको सहयोगमा ।
# प्रविधिको क्षेत्र # मोवाइल र इन्टरनेट # विकास # नयाँ वर्ष
प्रकाशित : पुष २९, २०७७, १३:२२:१२
चन्द्रमाबाट चट्टान र धुलो बेकेर अन्तरिक्ष यान फर्कियो पृथ्वीमा
LG को Foldable स्मार्टफोन पछि अब Rollable Laptop आउँदैछ, यस्ता छन् विशेषता
फोन स्क्रिनबाट स्कार्चहरू हटाउनका लागि ५ उपायहरू